mpanamboatra lamba sy mpamatsy lamba tsy misy tenona | China nonwoven sivana lamba Factory
Tsapa ny sivana PPS
Sivana polypropylene nahatsapa Ny orinasanay dia mamokatra fibre polypropylene avo lenta mba hahatsapana sivana fanjaitra polypropylene. Ankoatry ny tombony azo avy amin'ny sivana fanjaitra tototry ny fanjaitra mahazatra, ny polypropylene dia manana fanoherana asidra tsara kokoa, alkalinity ary teboka manalefaka ambany noho ny fibre polyester, noho izany ny fanjaitra polypropylene izay tsapa dia mazàna ampiasaina amin'ny hafanan'ny entona flue ambanin'ny 100 ℃ sy asidra avo ary alkalinity, na amin'ny liquid saha fisarahana mivaingana miaraka amin'ny asidra avo sy alkalinity. Amin'ny sehatry ny ranoka-solid se ...
polypropylene sivana tsapa
olypropylene sivana nahatsapa Ny orinasanay dia mamokatra fibre polypropylene avo lenta mba hahatsapana sivana fanjaitra polypropylene. Ankoatry ny tombony azo avy amin'ny sivana fanjaitra tototry ny fanjaitra mahazatra, ny polypropylene dia manana fanoherana asidra tsara kokoa, alkalinity ary teboka manalefaka ambany noho ny fibre polyester, noho izany ny fanjaitra polypropylene izay tsapa dia mazàna ampiasaina amin'ny hafanan'ny entona flue ambanin'ny 100 ℃ sy asidra avo ary alkalinity, na amin'ny liquid- saha fisarahana mivaingana misy asidra avo sy alkalinity. Amin'ny sehatry ny ranoka-solid sep ...
P84 sivana tsapa
P84 / polyimide sivana nahatsapa Riqi mamokatra sivana p84 mahazaka hafanana avo lenta nahatsapa izay fibre polyimide novokarin'ny orinasa Austria LENZING. Ny fitaovana sivana dia manana ireto toetra telo manaraka ireto: fanoherana ny mari-pana lehibe; hafanana miasa 260 ℃, fa amin'ny toerana azo antoka hiatrehana ny downtime sy ny lozam-pifamoivoizana. fanoherana simika tsara; ny sandan'ny sivana p84 sivana kitapo amin'ny vovoka fako asidra dia nohamafisina tao anatin'ny folo taona nandoroana ny fako. Ny lamosina ambany dia ...
Nahatsapa sivana akrilika
Ny fibre acrylic ampiasaina amin'ny indostrian'ny filtration amin'ny ankapobeny dia manondro ny acrylic homopolymer. Acrylic, fibre acrylic (fibre acrylic) no noforonin'i DuPont tamin'ny 1950. Manana boribory na oktagonal izy, malama ny tampony, tsy mora mandray rano izy, mahazaka asidra sy alkaly ary masoandro, ary tsy mora mavo ary tasy. Matetika antsoina hoe fibre polyacrylonitrile izy io. Ny fibre acrylic dia ny tanjaky ny fibre dia tsy dia ambony loatra, amin'ny ankapobeny mampiasa lamba filament polyester na acrylic sy polyester m ...